I-Tech Mix Agriculture
Sciences soLuntu Lwasekhaya
Imbali ye-Ancient Tech Technique
Ukuxuba okuxubileyo, owaziwa nangokuthi i-polyculture, ukucoca phakathi, okanye ukulima, luhlobo lolimo olubandakanya ukutshala izityalo ezimbini okanye ngaphezulu kwimizuzu enye, ulwalela izityalo ukuze zikhule kunye. Ngokubanzi, inkolelo kukuba ukutshala izityalo ezininzi ngokukhawuleza kusindisa indawo ukususela kwizityalo kwintsimi enye inokuvuthwa ngamaxesha ahlukeneyo, kwaye inikezela ubutyebi bendalo.
Iintlawulo ezixutywayo zokuhluma okuxutywe ziquka ukulinganiswa kwegalelo kunye nokuphuma kwezondlo zomhlaba, ukunqandwa kwamanxuwa kunye nezilwanyana ezinambuzane, ukuxhathisa kwezinto eziphambili kwezulu (emanzi, ezomileyo, ezitshisa, ezibandayo), ukukhutshwa kwezifo zityalo, ukwanda kwimihla yokuvelisa , kunye nokulawulwa kwezinto ezinqongophala (umhlaba) kwizinga elipheleleyo.
Ukuxuba okuxubileyo kwiNgqungquthela
Ukutyala amasimu amakhulu kunye nezityalo ezingatshatanga zibizwa ngokuba yizolimo zenkcubeko, kwaye yinto esandul Uninzi lweenkqubo zezolimo zexesha elidlulileyo zibandakanya uhlobo oluthile lokudibanisa, nangona ubungqina obudala obungabonakaliyo bolu hlobo kunzima ukuza. Nangona ukuba ubungqina bezityalo zezityalo ezitsalwayo (ezinjengezilwanyana ezincinci okanye i-phytoliths) zezivuno ezininzi zifunyanwe ngaphakathi kwintsimi yasendulo, kubonakalisile kunzima ukuhlula phakathi kweziphumo zokuxuba nokuxuba.
Zombini iindlela zikholelwa ukuba zisetyenziswe kwixesha elidlulileyo.
Isizathu esiyinhloko sokuphambi kwezinto ezahlukahlukeneyo mhlawumbi sasininzi ukukwenza kunye neemfuno zentsapho yomlimi, kunokuba nayiphi na ingqalelo ukuba ukuxutywa okuxutywayo kwakuyinto efanelekileyo. Kungenzeka ukuba izityalo ezithile ziguqulelwe ukuhluma ezininzi ngexesha, ngenxa yenkqubo yokuhlaziya.
I-Classic Mixed Cropping: Sisters Three
Umzekelo weklastiki wokuxuba oxubekileyo ngowama-" odade abathathu " baseMelika: ummbiwa , ubhontshisi kunye nama-cucurbits ( sikwashi kunye namathanga ).
Oodade abathathu bahlaziywa ngamaxesha ahlukeneyo kodwa ekugqibeleni badibaniswa ndawonye ukuze bakhe iqela elibalulekileyo lezolimo zaseMelika zaseMelika kunye nokutya. Ukuxuba okuxubekileyo koodade abathathu kubhalwe ngokomlando yiSeneca kunye ne-Iroquois kwizizwe ezikumntla-ntshona waseMelika kwaye mhlawumbi yaqala emva kwexesha le-1000 CE Le ndlela ibandakanya ukutshala zonke iimbewu ezintathu kwindawo efanayo. Njengoko bekhula, umbona unikezela isitshixo ukuze kubhontshwe iiimbotyi, iimbotyi zizityebi ezizinzileyo zokukhupha ezithathwe ngummbila, kwaye i-squash ikhula iphantsi ize ihlale ikhula kwaye igcine amanzi angena umhlaba ekushiseni.
UkuHlanganiswa KweMixed Modern
Agronomist ufunda izityalo ezixubekileyo uye wafumana iziphumo ezixubeneyo ezibonisa ukuba ukungafani kwemveliso kunokufezekiswa ngokuxutywa ngokukodwa kwezityalo zemvelo. Ngokomzekelo, intsebenziswano yengqolowa kunye ne- chickpeas inokusebenza kwindawo enye yehlabathi, kodwa ingenakusebenza kwenye. Kodwa, ngokubanzi kubonakala ukuba iziphumo ezintle ezibonakalayo xa zidibaniswa ngokufanelekileyo.
Ukuhluma okuxubileyo kulungele ukulima okuncinci apho ukuvunwa kungesandla. Isetyenzisiwe ukuphucula umvuzo kunye nemveliso yokutya kumafama amancinci kunye nokunciphisa amathuba okuhluleka kwezityalo-nangona enye yezityalo zingaphumeleli, insimu enye inokuvelisa ezinye iziphumo zezityalo. Ukuhluma okuxubileyo kudinga iimveliso ezincinane ezifana nezomquba, ukusika izilwanyana, ukulawulwa kwezinambuzane, kunye nokunkcenkceshela kunokuba ukulima ukulima.
Kubonakala kungenakungabaza ukuba lo mkhuba unikezela ngeendawo eziphilayo eziphathekayo, ukukhuthaza indawo yokuhlala kunye neentlobo zezilwanyana nezilwanyana ezinjengeendlumbane kunye neenyosi. Olunye u bungqina lubonisa ukuba iindawo zepolyckhi zivelisa izivuno eziphezulu xa kuthelekiswa nemimandla yenkcubeko kwiimeko ezithile, kwaye phantse rhoqo ikhulisa i-biomass ubutyebi ngokuhamba kwesikhathi. I-Polyculture emahlathini, i-heathlands, iziqithi, kunye nemilambo sele ibaluleke kakhulu kwi-regrowth yezinto eziphilayo kwiYurophu.
Uphononongo olutshanje (i-Pech-Hoil kunye nabalingane) lwenziwa kwi-tropical yase-American ecerensial achiote ( Bixa orellana ), umthi okhula ngokukhawuleza onomxholo ophezulu we-carotenoid, kunye nedayi yokutya kunye ne-spices kwiindawo ezincinci zokulima eMexico. Uvavanyo lujonge ukunyuka njengoko lukhulile kwiinkqubo ezahlukeneyo zegrumeki-ukujikeleza kwezolimo, ukulima kwendawo, kubandakanywa ukulima kwezilwanyana, kunye neentlobo ezahlukeneyo zezityalo kunye nokulima. I-Achiote iguqule inkqubo yayo yokuxhomekeka kuye kuxhomekeke kukuphi uhlobo lwenkqubo eyatyalwa kuyo, ngokukodwa umlinganiselo wokugqithisa okubonakalayo. Uphando olongezelelweyo lufunekayo ukuchonga amandla emisebenzi.
> Cardoso EJBN, uNogueira MA, kunye neFerraz SMG. 2007. Ukulungiswa kwe-Biological N2 kunye ne-N zamaminerali N e-corn-maize kunye ne-cropping e-southeast-brazil eBrazil. UkuLimo lwezoLimo 43 (03): 319-330.
> Daellenbach GC, PC Kerridge, Wolfe MS, Frossard E, kunye noFfinck MR. 2005. Ukuveliswa kwemveliso kwiinkqubo ezixubileyo ezixutywe kwi-cassava kwiifama zase-Colombian. IzoLimo, iiNzendalo kunye neNgqongileyo 105 (4): 595-614.
> I-Pech-Hoil R, uFerrer MM, uAguilar-Espinosa M, uValdez-Ojeda R, uGarza-Caligaris LE, kunye noRivera-Madrid R. 2017. Ukuhluka kwenkqubo yokuxuba yeBixa orellana L. (achiote) phantsi kweenkqubo ezintathu ezihlukeneyo zegrama . Scientia Horticulturae 223 (Ucediso C): 31-37.
> I-Picasso VD, i-Brummer EC, uLiebman M, iDixon PM kunye noWilsey BJ. Ngo-2008. Iintlobo zeentlobo zoLuntu zichaphazela ukuveliswa kweMveliso kunye nokuThulwa koTshwala kwiPerenculal Polycultures phantsi kweendlela ezimbini zokuLawula. ISityalo soSayensi 48 (1): 331-342.
> Plieninger T, Höchtl F, kunye ne-Spek T. 2006. Ukusetyenziswa komhlaba kunye nokugcinwa kwendalo kwimihlaba yasemaphandleni yaseYurophu. Inzululwazi yendalo kunye nomgaqo-nkqubo 9 (4): 317-321.
I-Potato e-Sweet (Ipomoea batatas) Imbali kunye neNdlu
Imbali yeZindlu zaseKhaya kunye neYaks
Ukusetyenziswa kobuGcisa kwiTanks Old Scuba
Ubudlelwane be-United States neRashiya
IJografi yeeNtaba zaseRoyy